Warxumatashiilka Soomaaliya “Getting Somalia Wrong” (WQ: Cabdirisaaq Sandheere)
Tags: waxa ayay badan
Buuggan la yidhaa “Getting Somalia Wrong” oo Af Soomaali ku noqon kara ‘ Warxumatashiilka Soomaaliya’ sida uu Cabdicasiis Mahdi ku afceliyay. Buugga Waxa qortay Maari Haarbar, oo ah gabadh ajnebi ah. Maari, waxa ay u shaqaysaa Idaacadda BBC. Waxa ay BBC uga soo warramaysay tan iyo markii dagaalkii sokeeye qarxay sannadkii 1991kii. Waxa ay shahaadooyin Jaamacadeed ka qaadatay Jaamacadda Cambridge, iyo School Oriental and African Studies. Meelo kaladuwan ayay wax ku daabacdaa sida ‘ The Times’ iyo ‘ The Washintong.’
Arrimaha Soomaalida muddo Badan ayay ka hadlaysay, oo wax ka qoraysay. Maqaallo badan ayay ka qortay. Buug la yidhaa “ Everything I Told Is True” oo ay Al Shabaab ka qortay, ayay soo saartay kalhore 2019kii.
Buuggu, waxa uu ka midyahay taxane la yidhaa “ Doodda Afrika” oo ah taxane buugaag aqooneed ah, oo ka hadlaya arrimaha Afrika sida ay yihiin maanta.
Waxa kale, oo ay Maari aad ugu dheeraanaysaa sida magacii MUQDISHO u muunadxumaaday, ee macnihii uu lahaa mid ka duwan uu u yeeshay. Magaca Muqdisho meelo badan waxa uu la macneyahay “ meel kharriban oo run ahaantii u taagan xaalad dhibaato ah.” Maari waxa ay xusaysaa inay jirtay Riwaayad Ingiriiska lagu metelay 2011kii oo loogu magacdaray MUQDISHO! Riwaayaddu kamay hadlayn arrimaha Soomaalida iyo wax la xidhiidha toona; se waxa ay ka hadlaysay Dugsi Sare oo Ingiriis ah oo qalalaase ka dhacay! Ogsoonoow, oo Dugsigaasi Ingiriiska ayuu ku yaallaa, haddana Magaca Muqdisho ayaa riyaawaddaas laga metelay loogu magacdaray!
Qeybta 1aad: waxa ay Maari ladh uga dhigaysaa ‘ Qabiil iyo Dal.’ Marka koowaad, waxa ay tilmaamaysaa halka ay Soomaaliya ku taal, oo ah Geeska Afrika, inay qaab gees oo kale ah khariidadeedu tahay way xusaysaa. Inay Waddamada Carabta aad iskugu dhawyihiin, oo badi u dhexayso ayay ku sii daraysaa. Waxa kale, oo ay raacinaysaa in ay Soomaaliya leedahay Bad aad u ballaadhan, oo kheyraad badan ceegaago.
Qeybta 2aad: waxa ay ladh uga dhigaysaa ‘ Taariikh.” Sooyaalkii ay Ummadda Soomaaliyeed lahayd ayay waxooogaa innooga qadhiidhaysaa. Ka Soomaali ahaan, badankeennu waynu naqaan inta ay ka warramayso, oo waa inta golayaaasha iyo maqaaxiyaha lagaga sheekeeyo. Se waxa aad mooddaa inay ajaanibka barayso.
Qeybta 3aad: ee buugga Maari Haarbar waxa ay ladh uga dhigtay ‘ Islaamiyiintii.’ Waxa ay kaga warramaysaa Ururradii Islaamka ahaa ee Soomaaliya soo maray intii burburka ka dambaysay. Waxa ay ka bilaabaysaa ururkii Al Itixaad. Ururkaasi burburka ka dib ayuu samaysmay, muddo waxoogaayana wuu sii shaqaynayay. Waxa ku xigay Maxaakimtii Islaamka. Maxaakimtaasi dalka ayay xukunkiisa qabatay. Sh. Shariif oo ka mid ahaana Madaxweyne ayuu dalka ka noqday. U jeeddada ururradaasi waxa ay ahaayeen:
Qeybt 4aad, waxa ay ladh uga dhigaysaa “ Qaran Guuldarraystay.” Halkan waxa aad mooddaa inay isleedahay caalamku maadaama uu Soomaaliya u yaqaan ‘ Qaran dhicisoobay’ indhaha ka jeedi. Inta badan caalamku Soomaaliya warar aan wanaagsanayn ayay ka maqlaan. Waxa ugu badan ee Soomaaliya laga weriyaa waa gaajo, saboolnimo, xanuuno, colaad, iyo qas! Maari, waxa ay leedahay Soomaalida intaas kali ahi kama jiraane, waxa jira waxyaabo horumara oo ka socda.
Qeybta 5aad, waxa ay Maari ladh uga dhigaysaa “ Budhcadbadeed.” Waxa ay kaga warramaysaa sida ay Soomaaliya budhcadbadeedu ugu badantahay, iyo xaaladaha ugu gadaan. Sidoo kale, waxa ay ku daraysaa dhaqaalaha ay ka helaan budhcadbadeedu, sida loola tacaalo budhcadbadeeda, cidda ku lug leh IWM.
Mawduucan, waxa aad mooddaa in Maari si dadbadan ay Soomaaliya, iyo guud ahaan dhulka Soomaalida ugu tilmaamayso “Meel budhcad ah, oo la isdhaco. Dadka Soomaalidu yihiin mooryaan waxkasta dhacda, oo waxa ay arkaan ba damac ka qabto, oo inay dhacaan isku daya.”
Qeybta 6aad, oo ah qaybta ugu danbaysa buugga waxa ay ladh uga dhigaysaa “ Soomaaliya & adduunyada.” Waxa ay kaga warramaysaa sida Soomaalidu ay adduunyada ugu kala filiqday.